उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र परेका विद्यालयहरू चार दिन बन्द हुने
काठमाडौं । आगामी मंसिर १४ हुने उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र परेका विद्यालयहरू चार दिन बन्द हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि बुधबारदेखि शनिबारसम्म
मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू शुल्क फिर्ता गर्न सहमत
काठमाडौं । सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच सहमति जुटेको छ । हिजो मध्यरातिसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको सरकार र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीचको बैठकले दुई बुँदे सहमति गरेको छ । सहमतिअनुसार, आजबाटै
निर्धारित समयभित्र शुल्क समायोजन गर्न अनेरास्ववियुले मेडिकल कलेजहरुसँग आग्रह
काठमाडौं । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले सरकारले दोस्रो पटक दिएको निर्धारित समयभित्र शुल्क समायोजन गरी कार्यान्वयन गर्न मेडिकल कलेजहरुसँग आग्रह गरेको छ । अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महर
देउसि भैलिको रकमले बाँडे बिद्यालयमा शैक्षिक सामाग्री
नुवाकोट । जिपि कोईराला अध्ययन केन्द्रले देउसि भैलि कार्यक्रमबाट सकंलित रकम तादि गाउपालिका १ उर्लेनिमा रहेको गगांदेबि प्राबि,सुन्दरादेबि माबि,मगंलेश्वरि प्राबिमा कम्प्युटर,शैशिक तथा खेलकुद सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ।हस्तान्तरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि
विद्यालय जाँदै गरेकी प्रधानाध्यापकमाथि खुकुरी प्रहार
म्याग्दी । पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२ रुमस्थित राष्ट्रिय जनकल्याण आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक इन्द्रकुमारी पुनलाई खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । घरबाट विद्यालय जाँदै गरेकी प्रधानाध्यापक पुनलाई बुधबार खुकुरी
काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनशन तोड्न डा.गोविन्द केसीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले डा. केसीले उठाएका मुख्य मागहरु सम्बोधन भइरहेको बताउनुभयो । डा.
काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई लिन नेपाली सेनाको हेलिकप्टर डडेल्धुरा पुगेको छ । तर केसीले भने आफू स्वस्थ रहेको भन्दै अनशन तोड्न र काठमाडौं
डडेल्धुरा । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै सत्याग्रहमा रहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको अनसन आज आठौ दिनमा पुगेको छ । डा. केसी अनसन बसेको आठदिन बितिसक्दासमेत सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको
काठमाडौं । काठमाण्डाै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि स्थानमा नयाँ विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । महानगरभित्र भएका विद्यालयहरूलाई नै व्यवस्थित बनाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्दै महानगरले नयाँ विद्यालय सञ्चालनमा
काठमाडौं । विद्यार्थी सङ्गठनले वरिष्ठ प्राध्यापकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनप्रशासन विभागको प्रमुखमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै उपकुलपतिको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । एउटै व्यक्तिलाई दुई संस्थाको प्रमुख बनाउन नहुने तथा विभागमा